Movie Translation Softwar သုံးနည်းသိချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
Movie Translation Softwar သုံးနည်းသိချင်လို့ပါ
အခုမြန်မာပြည်မှာ ခေတ်စား နေတဲ့ english တို့ chinese movie တို့ မှာစာတန်းထိုး၇င် သုုံးတဲ့ translation software အကြောင်း သိချင်လို့ပါ။ သိသူများ ရှိ၇င် ဖြေပေးပါဦး။:5:
ကျွန်တော်လည်းသိချင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ movie ကဟာကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ software ကို တော့ရှိလားမရှိလားမသိသေးပါ။ language ကို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ software တော့ရှိတယ်ဗျ။ ပြင်သစ်စကားလိုု ပြောပြီး အင်္ဂလိပ်လို ကြားတဲ့ software ပေါ။
ှSony DVD Architect software ဆိုတာ ကော translation software လား editing software လားသိတဲ့သူရှိ ၇ငိပြောပြပေးပါဦး။
translation တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဘာသာပြန်ပြီး ထည့်တာပါ။ အများအားဖြင့် english စာကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် မြန်မာ ဘာသာ အခြားဘာသာ ပြန်ပြီး စာရိုက်ထည့်ထားတာပါ။ software ကတော့ ကျွန်တော် သေသေချာချာ မသိပါဘူး။ မေးကြည့်ပေးပါ့မယ်။ MZ မှာတော့ Video Editing ပိုင်းသိတဲ့ လူနည်းပါလိမ့်မယ်။
အခွေထဲကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုရမယ်မထင်ပါဘူး။ အပြင်မှာပြန်ပြီးမှ ပြန်ထည့်တာမျိုးတော့လုပ်ဖူးပါတယ်။ ဒါတောင် မူယင်း dvd မှ အဆင်ပြေတာများပါတယ်။
Sony DVD Architect software ဆိုတာ ကော translation software လား editing software လားသိတဲ့သူရှိ ၇ငိပြောပြပေးပါဦး။
[HTML]http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro/bluray[/HTML]Professional Blu-ray Disc Authoring
Author movies on high-definition Blu-ray Discв„ў as easily as authoring DVDs with DVD Architect Pro5software. DVD Architect Pro5software enables independent producers and videographers to authorahigh-definition Blu-ray Disc, complete with full motion buttons, motion menus, scene selection menus, subtitles, and alternate video and audio tracks. With DVD Architect Pro5software you can authoraproject once, then choose to burnaBlu-ray Disc orastandard-definition DVD.
Editing software ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ကြုံလို့ တစ်ခါထဲ ပြောလိုက်ဦးမယ်။ ဒီဟာကတော့ translation အမျိုးအစားပါ။
[HTML]http://www.thelanguagetranslation.com/film-translation.html[/HTML]ဘာသာပြန်ရာမှာ စာတန်းထိုးနည်းရယ် နောက်ခံစကားပြောနည်းရယ် ၂မျိုးရှိတယ် တဲ့။
ဗီဒီယိုကနေ အသံကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်တဲ့ software တော့ မကြားဖူးသေးဘူး။ ခဲယဉ်းမယ်ထင်တယ်။ Adobe Premier Pro, Ulead, Pinnacle Studio တို့သုံးပြီး ဘာသာပြန်ပြီးသားကိုပဲ ပြန်ရိုက်ထည့်ပြီး စာတန်းထိုးထည့်ပေးတာပဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။
စာတမ်းထိုးဖို့ အတွက် အလွယ်ဆုံး နည်းတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ကိုရီးယားကားတွေ ဘာသာပြန်ချင်ရင် ကျွန်တော် ရှာပေးတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါက .srt ဖိုင်လေးပါ။ နာမည်ရှိတဲ့ ကားတော်တော် များများအတွက် .srt ဖိုင်က ရှာရတာ မခက်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး အဲဒီကားအတွက် အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့ .srt ဖိုင်တစ်ခုကို ရှာဒေါင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အင်္ဂလိပ် စာတမ်းနေရာမှာ သင်တော်သလို မြန်မာဘာသာ ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့။ ပြီးရင် မူရင်း ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ဖိုင်(folder) တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ အရေးကြီးတာက ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ file name တူဖို့ပဲ။ ဥပမာ- ရုပ်ရှင်ကားက hero.avi ဆိုရင် .srt ဖိုင်က hero.srt ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် player တော်တော်များများနဲ့ ဖွင့်လို့ ရပါပြီ။
မြန်မာ ဘာသာ ပြန်တဲ့နေရာမှာတော့ တစ်ချို့က ၀င်းအင်း၀ကို သုံးကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဇော်ဂျီပဲ သုံးပါတယ်။ ၀င်းအင်း၀သုံးရင် ဖိုင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဘာမှ ပြောင်းပေးဖို့ မလိုပေမဲ့ ဇော်ဂျီသုံးတဲ့ လူဆိုရင်တော့ ဖိုင်သိမ်းတဲ့ အချိန်မှာ unicode ဒါမှမဟုတ် utf-8 နဲ့ သိမ်းပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ.....
ဒါကတော့ srt ဖိုင်လေးတွေ ရှာလို့ ရတဲ့ နေရာ အချို့ပါ။ တခြားနေရာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
အခုမြန်မာပြည်မှာ ခေတ်စား နေတဲ့ english တို့ chinese movie တို့ မှာစာတန်းထိုး၇င် သုုံးတဲ့ translation software အကြောင်း သိချင်လို့ပါ။ သိသူများ ရှိ၇င် ဖြေပေးပါဦး။
translation software ကတော့ ရှိချင် ရှိပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ တခြားဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာကို ဘယ်လိုမှ မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ (ဘာလို့ အဲဒီလို ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ အဲဒီလို ဆော့၀ဲလ်ရှိဖို့ နေနေသာသာ အတွဲလိုက် ပြန်ပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘီဓာန် ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခုတောင် မရှိသေးလို့ပါ)
အခုရှိနေတာတွေက ပြသတဲ့လူတွေက ကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ...
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။ editing ပိုင်းကိုဒီထက် ပိုဆွေးနွေးပေး ပါဦး။ အပြင်မှာ လဲမေး၇မယ့်သူ ရှာမတွေ့တာနဲ့ MZ member တွေကိုပဲ အားကိုးပါတယ်။